“थ्रि स्टार” होटल नान्समा मोबाईलको भरमा कार्यक्रम - Butwal Online
“थ्रि स्टार” होटल नान्समा मोबाईलको भरमा कार्यक्रम
बुटवल, २४ असार । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा मन्त्रालयहरु लाई बजेट सक्न भ्याई–नभ्याई छ । यस बीचमा सोमबार साँझ प्रदेश नं. ५ को उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयले भैरहवामा “भम्रण बर्ष” का नाममा प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लाका केही निश्चित पत्रकार र भारतका ३२ जना पत्रकार बीच जमघट गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो ।
भारतको महारागञ्ज, लखनउ, गोरखपुर, नौतुना, सुनौली लगाएका क्षेत्रबाट गरी ३२ जना भारतिय पत्रकारहरुको उपस्थिती समेत कार्यक्रम थियो । उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्री लिला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रम भैरहवामा रहेको थ्रि स्टार मान्यता प्राप्त होटल नान्समा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रम साँझ ६ बजे सुरु भयो । कार्यक्रम सुरु हुन साथ विद्युत कटौती सुरु भयो । मन्त्रालयका कर्मचारी, पत्रकार सवैले मोबाईलको टर्च बाले । “एक पटक होईन, पटक–पटक लाईन जाँदा समेत होटलले चासो दिएन” उक्त कार्यक्रममा सहभागि एक पत्रकारले भने–“थ्रि स्टार लेबलको होटलको यस्तो लापरबाही कही पनि देखेको थिईन ।”
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण बर्षलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठक बाटै ४ करोड रुपैया छुटटाएर कार्यक्रम गर्दै आईरहेको मध्ये एक कार्यक्रम सोमबार भारत र बुटवल, भैरहवाका पत्रकार हरु बीचको छलफल कार्यक्रम पनि थियो । कार्यक्रम भइरहुन्जेल विद्युत आउने जाने भएपछि पत्रकार समेत आक्रोशित भएका थिए ।
“पटक–पटक लार्यन जाँदा कार्यक्रम समेत फितलो भयो, नान्स होटलले जेनेरेटरसमेत चलाएन” कार्यक्रममा सहभागि अर्का पत्रकारले भने । उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु शर्मा बोल्दै थिए, त्यत्तिकैमा लाईन गयो, सवैले मोबाईल बालेरै आधा घण्टा भन्दा बढि कार्यक्रम भएको थियो । यस्तो हुँदा भारतका पत्रकारहरुले समेत कार्यक्रममा असन्तुष्टि राखेका थिए ।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा बुटवलबाट २० जना पत्रकारहरुलाई गाडि रिजर्भ गरेर भैरहवा लैजाने र ल्याउने समेत व्यवस्था मिलाइएको थियो ।